IMicrosoft isebenza ku-Android subsystem ye Windows 10 | Kusuka kuLinux
IMicrosoft isebenza ku-Android subsystem ye Windows 10
Ukusekelwa kunganikezwa maduzane yezicelo ze I-Android isebenzisa isixazululo esikhethekile sesoftware yeWindows 10 okungaqeda isidingo sokulingiswa kwe-Android noma ukubukwa kwefoni.
IMicrosoft isezinhlelweni zokwakha isistimu engaphansi, Ifana ne-Windows Subsystem yeLinux, eyenza izinhlelo zokusebenza ze-Android zisebenze ku Windows 10.
Ngenkathi kunezindlela eziningana zokulingisa izinhlelo zokusebenza ze-Android, akukho ukuxhaswa okusemthethweni kwe-Android kuWindows okwamanje.
Isixazululo esisha se-software Inegama lekhodi "Project Latte" futhi ingenza ukubonakala kwayo ngonyaka olandelayo. Le nkampani yake yaba nomqondo wokuhlanganisa izinhlelo zokusebenza ze-Android ku Windows 10 ngokusebenzisa iphrojekthi ebhalwe nge-Astoria engakaze ibone ukukhanya kosuku.
Iphrojekthi Latte ihlose ukuhlinzeka ngomkhiqizo ofanayo futhi mhlawumbe inikwe amandla yiWindows Subsystem yeLinux (WSL). Noma kunjalo, iMicrosoft izodinga ukuhlinzeka ngohlelo lwayo lwe-Android lwezinhlelo zokusebenza ze-Android ukuze zisebenze empeleni.
Ngokwabelana ngemakethe okucishe kube ngama-70% emkhakheni weselula futhi ngokungafani ne-iOS, uhlelo oluvulekile lwe-ecosystem, kungaba iphutha ukungafaki ngqo ukuxhaswa kwe-Android Windows 10.
I-Microsof isiqalile ukunikela ngokusekelwa okulinganiselwe kokwethula izinhlelo zokusebenza ze-Android Windows 10 usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe- «Ifoni yakho» namadivayisi ahambisanayo we-Android. Kodwa-ke, ukwethula izinhlelo zokusebenza ze-Android ngocingo lwakho kwenziwa ngokusakaza izinhlelo zokusebenza kusuka efonini esikhundleni sokuzisebenzisa Windows 10.
Uhlelo olusha lwe-Windows 10 kuzovumela izinhlelo zokusebenza ze-Android ukuthi zisatshalaliswe nge-Microsoft Store bese usebenza endaweni ebonakalayo.
Umuntu angazibuza ukuthi iMicrosoft izokwenzenjani ngesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esidingekayo kuzinhlelo zokusebenza ze-Android.
Kodwa Ngokukhishwa kwe-WSL 2, iMicrosoft yaqala ukusebenza kuphrojekthi kubizwa «WSL-G"Noma" WSL - Graphic Architecture ". Le phrojekthi isebenzisa iseva yokubonisa yeWayland eyakhelwe ngaphakathi ukusebenzisa izinhlelo ze-Linux GUI ngqo kwi Windows 10 isikhombimsebenzisi somsebenzisi.
USteve Pronovost wakwaMicrosoft wakhuluma engqungqutheleni yeXDC 2020 ngoSepthemba odlule futhi wachaza ngokuningiliziwe isici esisha seWSL-G esakhiwa yiMicrosoft:
“Ukusekelwa kwezikhombimsebenzisi zokufaka isicelo ku-WSL kuyaqala ukwenzeka! Sisondela ekubukeni kuqala kokuqala futhi siyajabula ukumemezela inguqulo ye-Preview ye-Windows Insiders ezinyangeni ezizayo. " “Sifake imininingwane eminingi yokuhlenga nokuqedela, njengokukhombisa izithonjana zezinhlelo zokusebenza ze-Linux kubha yomsebenzi nokusekela umsindo ngombhobho wakho (futhi yebo, leyo inguqulo yeLinux yamaMicrosoft Teams asebenza kwiWSL). . «
IPort WSL WSL, kufaka phakathi into G noma into efanayo, ukusebenzisa isistimu yokusebenza ye-Android nokuvumela Windows 10 ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Android.
Iphrojekthi Latte, kuzovumela abathuthukisi bezinhlelo zokusebenza ukuletha izinhlelo zokusebenza ezingakabi nayo inguqulo ye-Windows. Umuntu angazibuza ukuthi iziphi izinhlobo zezinhlelo zokusebenza ezizotholakala uma iphrojekthi iqala ngempela, njengoba izinhlelo zokusebenza eziningi ze-Android zenzelwe amafoni futhi azithandeki kangako kusikrini esikhudlwana kunefoni.
IMicrosoft kusamele iphawule ngezindaba mayelana neProjekthi Latte, Kepha uma ucabanga ukuthi awuhlehlisi izinhlelo zakho, ukwethulwa kwezinhlelo zokusebenza ze-Android endaweni yesikhulumi kuzokwenza Windows 10 uhlelo olusebenzayo olusebenzela yonke indawo uma kukhulunywa ngalo. ukwesekwa kohlelo lokusebenza, ngokusho kweWindows Central. Iphrojekthi ingaba yingxenye ye Windows 10 buyekeza ku-Fall 2021.
IProjekte Latte ngeke ikhetheke kunoma iyiphi ingxenyekazi ethile, okusho lokho uzokwazi ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Android ku-Intel, i-AMD, kanye nehadiwe le-ARM. Lokhu kunganikeza iWindows 10 umfutho, onenkinga kungxenyekazi ye-ARM.
Kodwa-ke, abanye baveze izingqinamba ezithile ngeWayland.
“Lowo muzwa lapho kukhishwa inguqulo ezinzile yeWayland kwiWindows ngokushesha kuneLinux; (Isexwayiso: Ngizamile ukuyisebenzisa kuNvidia, kepha ayisebenziseki, ngazama nokuyisebenzisa kuRadeon 5700, ilenga ekuqaleni, ngisho negundane alisebenzi) ”, E
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » IMicrosoft isebenza ku-Android subsystem ye Windows 10
I-Proxmox VE 6.3 isivele ikhishiwe futhi iza nokusekelwa kwe-Backup Server nokuningi
Novemba 2020: Okuhle, okubi nokuthakazelisayo kweSoftware yamahhala